Iindaba - Nguwuphi umahluko phakathi kweeceramics kunye neethambo china?
Nguwuphi umahluko phakathi kweeceramics kunye neethambo china?
1. Ukugcinwa kweekeramiki
1. Isepha yekhaya inokusetyenziselwa ukucoca yonke imihla.
2. Yongeza i-ammonia encinci ngesepha okanye usebenzise umxube wexabiso elilinganayo le-linseed kunye ne-turpentine kuqala, eya kuthi ibe ne-decontamination eyomeleleyo kwaye yenze iithayile zikhazimle ngakumbi.
3. Ukuba uchithe ulwelo oludayiweyo olomeleleyo olufana neti okanye inki eqinileyo kwizitena, zisule ngoko nangoko.
4. I-Wax iithayile ezikhazimlisiweyo rhoqo ukufumana ukhuseleko oluhlala ixesha elide, kwaye ixesha lekhefu ziinyanga ezi-2-3.
5. Ukuba kukho imikrwelo embalwa kumphezulu wezitena, gcoba intlama yamazinyo kwindawo ekrwada uze uyisule ngelaphu elithambileyo lokucoca imikrwelo.
2. Ukugcinwa kwethambo le-china:
1. Kufuneka icocwe ngesandla, hayi isitya sokuhlambela izitya. Ukuba awufuni ukuhlamba ngesandla, kuya kufuneka ukhethe isixhobo sokuhlamba izitya esine "porcelain kunye nekristale".
2. I-tableware enemiphetho yegolide akufuneki ifakwe kwi-oven microwave ukunqanda ukubola.
3. Ixabiso lokuhlamba i-PH kufuneka libe phakathi kwe-11-11.5.
4. Xa uhlamba ngamanzi acocekileyo, ubushushu bamanzi abudluli kuma-80 ℃.
5. Sukuntywila indebe eshushu ngokuthe ngqo emanzini abandayo, ukuze ungonakalisi i-porcelain ngenxa yotshintsho lobushushu olukhawulezileyo.
6. Ukuba kukho ukukrwela, ungasebenzisa i-toothpaste ukupholisha.
7. Ukuba kukho amabala eti, inokucocwa ngejusi yelamuni okanye iviniga.
8. Kungcono ukuba ungayisebenzisi ngobushushu ngequbuliso, ukuze ungagqabhuki.
9. Sukusebenzisa idangatye elivulekileyo ngqo
1. Izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto:
I-Porcelain yenziwe ngodongwe lwendalo kunye neeminerali ezahlukeneyo zendalo njengezona zinto ziphambili ziphambili, kunye ne-porcelain enomxholo womgubo ongaphezulu kwe-25% kwizinto ezingafunekiyo yithambo le-china.
2. Iinkqubo ezahlukeneyo:
I-Bone china ukudubula yamkela inkqubo yesibini yokudubula, kwaye ubushushu buphakathi kwe-1200 degrees ukuya kwi-1300 degrees. Ngokubanzi, iiceramics zinokwenziwa emva kokudubula kwi-900 degrees.
3. Ubunzima obahlukeneyo:
Ngenxa yokuqina okuphezulu kwethambo le-china, i-porcelain icekeceke kakhulu kune-porcelain eqhelekileyo, ke ithambo le-china lomthamo ofanayo lilula ngakumbi kune-porcelain.
I-Bone china yavela e-United Kingdom kwaye iyiporcelain ekhethekileyo yosapho lwasebukhosini kunye nobungangamsha base-United Kingdom. Iiceramics zivela eChina kunye nembali ende.
1. Imbono esempilweni
Umahluko kwizixhobo kunye nobugcisa phakathi kwethambo i-china kunye neeseramics inquma ibakala labo. Amathambo amathambo ezilwanyana lukhetho oluphambili lokwenza i-china yethambo, kwaye umxholo wayo uphezulu njenge-40%. Okwangoku, isidlo seethambo esikumgangatho ophezulu sosapho lwasebukhosini lwaseBritane esineyona ndawo iphambili yokutya kwethambo emhlabeni iphezulu njenge-50%.
2. Inqanaba lenkqubo
Intyatyambo ye-china yentyatyambo kunye nomphezulu oqaqambileyo zidityanisiwe, kwaye ayiqulathanga lead kunye necadmium eziyingozi emzimbeni womntu. Ingabizwa ngokuba yi "porcelain eluhlaza" yokwenyani. Ukusetyenziswa kwexesha elide kuyanceda kwimpilo yabantu. I-Bone china igxothwe kabini, kwaye inkqubo inzima. Iveliswa kuphela eBritani, China, Japhan, Jemani, Rashiya, kwaye Thailand. I-Bone china ilula, ixinene kwaye inzima (kabini njenge-porcelain yokusebenzisa yonke imihla), akukho lula ukuyinxiba nokuqhekeka, ukutshintshiselana ngobushushu kwi-180 degrees celcius kunye ne-20 degrees celsius ngaphandle kokuqhekeka, kwaye inqanaba lokufunxa amanzi lingaphantsi kwe-0.003%.
3. Isiphumo sokugquma ngobushushu
Xa kuthelekiswa ne-porcelain yesiko, i-bone yethambo inokugcina ubushushu ngcono kunye nencasa engcono xa usela ikofu okanye iti.
I-Bone china yomelele ngakumbi kuneeseramikhi eziqhelekileyo. Kungenxa yokuba ukwakhiwa kwethambo le-china kwahlukile kwi-porcelain yesiqhelo. Inokuba mncinci, yomelele kwaye inxibe ngakumbi, akukho lula ukuyinxiba kunye nokuqhekeka. Ukuqina kwethambo i-china kufanele ukuba kube ngaphezulu kwamaxesha ama-2 eekeramiki. I-Bone china ayizukuqhekeka ngexesha apho ubushushu butshintshiselwa phakathi kwe-180 kunye ne-20 20 emanzini. Nangona kunjalo, kungcono ukuba ungaphindaphindeki ngabom ukupholisa kunye nokufudumeza ngexesha lokusetyenziswa, ngenxa yokwanda kwe-thermal kunye nokunciphisa, iimveliso zePorcelain zithande ukuqhuma.
5. grade Product
Xa kuthelekiswa neeseramikhi eziqhelekileyo, ithambo le-china linqanaba eliphezulu kakhulu. Kangangexesha elide, i-china bone ibiyiporcelain ekhethekileyo yasebukhosini baseBritane kunye nezidwangube. Okwangoku kuphela kweporcelain ephezulu ekumgangatho wehlabathi. Inamaxabiso amabini okusetyenziswa kunye nobugcisa. Luphawu lwamandla kunye nenqanaba kwaye yaziwa njengokumkani we-porcelain.
Ukongeza, i-china bone ithambile kwaye iyabonakala, imilo yayo intle kwaye intle, umphezulu wombala ufumile njengejade, kwaye umphezulu weentyatyambo unombala ngakumbi. Ukuphuhliswa kwethambo le-china kwamkelwe kwaye kwasetyenziswa ngabantu abaninzi nangakumbi. Azisekho nje kubafana abatya, izitya zesuphu, kodwa nanjengohlobo lwefashoni kunye nokonwatyiswa kobugcisa, njengokubonakaliswa kwempucuko yokutya, ngokuthe ngcembe ingene kubomi bethu bemihla ngemihla.